Barcelona oo go’aansatay inay iska iibiso Philippe Coutinho xagaagan… (Waa kuwee kooxaha doonaya?) – Gool FM
(Barcelona) 10 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay go’aansatay inay iska iibiso Philippe Coutinho inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan.
Catalan ayaa 142 milyan oo gini kula soo saxiixatay Coutinho, iyagoo bishii Janaayo 2018-kii ka soo qaatay kooxda reer England ee Liverpool, kubbad sameeyahan ayaana u dhaliyey 21 gool 72 kulan oo uu u saftay tartammada oo dhan.
Yeelkeede, Coutinho ayaa la kulmay dhaleeceyn xooggan oo loo soo jeediyey iyadoo jamaahiirta kooxdu ay u sheegeen inuusan u qalmin inuu xirto maaliyadda Barcelona, xiddigan reer Brazil ayaana ku guuldarreysatay inuu wax bandhig muuqdo ah sameeyo kulankii kooxdiisa reer Spain ay guuldarrada xun kala kulantay Liverpool ee Champions League, waxaana ka muuqday niyad-jab aad u weyn.
Sida ay warinayso Jariiradda ESPN niyad-jabkaas ayaa ku riixay madaxda kooxda Barca inay go’aan ku gaaraan in Coutinho uu diyaar u noqon doonto inuu ku biiro kooxdii uu doono xilli ciyaareedka soo aaddan.
Warar hore ayaa soo jeedinayay in Barcelona ay diyaar u tahay inay aqbasho dalabyada ku kacaya 105 milyan oo gini ee u imaanaya Coutinho, inkastoo aysan caddeynin in koox kasta ay diyaar u tahay inay la kulanto.
Kooxaha Manchester City, Manchester United iyo Chelsea ayaa dhammaantood la la xiriirinayaa saxiixa xiddigan 26-sano jirka ah, iyagoo doonaya inay Coutinho dib ugu soo celiyaan dalka Ingiriiska.
Antoine Griezmann oo ka mid ah labo xiddig oo ay si dhab ah u doonayso kooxda Barcelona kaddib markii laga soo reebay Champions League